ဒေါင်းလန်းထမင်းတွေကို ရန်ကုန်မှာတင် စားလို့ရပီ ဝေ့….! 1033 views
ဒေါင်းလန်းထမင်းတွေကို ရန်ကုန်မှာတင် စားလို့ရပီ ဝေ့….!
ဒေါင်းလန်းထမင်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် သတင်းကောင်းတစ်ခု၊ လှိုင်က ကမာရွတ်ဘူတာရုံလမ်းမှာ My Myanmar ဆိုတဲ့ဆိုင်လေး အသစ်ဖွင့်ထားတာ၊ တစ်လတောင်မပြည့်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီ ဆိုင်မှာ ဒေါင်းလန်းထမင်း၊ မြန်မာထမင်းဟင်းနဲ့ မနက်စာမီနူးအစုံအလင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒေါင်းလန်းကိုမှ ရှမ်းဒေါင်းလန်း၊ အင်းဒေါင်းလန်း နဲ့ ကချင်ဒေါင်းလန်းဆိုပြီးရှိပါတယ်။ ဟန်နီတို့အဖွဲ့ကလဲ အကြိုက်ကတစ်ယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်နေလို့ ဒေါင်းလန်းသုံးမျိုးလုံးမှာစားဖြစ်ခဲ့တယ်… ဟီးဟီး :D
ဒေါင်းလန်းက ညနေသုံးနာရီနောက်ပိုင်းမှာမှရတာပါ။ ပြီးတော့ မှာမှလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လုပ်ပေးတာပါ။ အဲ့တော့ ဆိုင်ရောက်မှမှာမယ်ဆို မိနစ်(၃၀)လောက်တော့အချိန်ပေးရမယ်၊ ဘာလို့ဆိုတော့ သူကလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လုပ်တာဆိုတော့လေ။ သွားစားမယ်ဆိုရင်တော့ကြိုပြီး Reserve လုပ်ထားရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။ အဲ့မှာဆိုရင်အသားဟင်းပါမယ်၊ အရွက်ကြော်၊ အသုပ်၊ အတို့နဲ့ ဟင်းရည်တွေဆိုပြီးပါတာပေါ့နော်…။ အရွက်ကြော်တွေနဲ့ အသုပ်တွေကတော့ မှာတဲ့ဒေါင်းလန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရော ရာသီပေါ်စာတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။
မှာထားတာတွေမရခင် ဆိုင်ကိုလေ့လာကြည့်သလောက်တော့ သူက ရတနာမွန်လမ်းမပေါ်မှာပဲရှိတော့ ရှာရတာအဆင်ပြေ တယ်။ နောက်တစ်ချက်က နေရာလဲကျယ်တော့ Car Parking အတွက်လဲပူစရာမလိုပါဘူး။ ဆိုင်ရဲ့ Decoration ကိုလဲ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအငွေ့အသက်ရအောင် မြန်မာမှုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အပြင်အဆင်လေးတွေလဲတွေ့ရပါတယ်။
ဒါနဲ့အရင်ဆုံးရောက်လာတာက ‪#‎အင်းဒေါင်းလန်း‬ အဲ့မှာဆို ငါးထမင်းနယ်နဲ့ တို့ဟူးသုပ်ကအဓိကအမယ်တွေပါ။ ကြက်သွန်ပေါင်းကြော်၊ ၀က်သားနီချက်၊ ငါးစပ်သီးရည်(စပ်သီးဆိုတာမြန်မာလိုဆို ငရုတ်သီးကိုပြောတာပါ)၊ ဟင်းနုနွယ်ကြော်၊ ဂျူးမြစ်သုပ်၊ ဆန်လုံးစီကြော်၊ နဲ့ အချိုပွဲသဘောမျိုး ခေါပုတ်ကြော်တွေ စုံနေအောင်ပါပါတယ်၊ အဲ့မှာမှ ငါးထမင်းတို့ထမင်းတို့ကလိုအပ်ရင်လိုက်ပွဲလဲထပ်ပေးပါတယ်။ တကယ့် တောင်ကြီးမှာရောက်ပြီးစားနေရသလို ရိုးရာအရသာ စစ်စစ်ကိုခံစားရမှာပါ။ အကုန်လုံးခြုံကြည့်ရင်သူက အရမ်းအီတာမျိုးလဲမဟုတ် အစပ်လဲမပါတဲ့ အချိုအရသာမျိုးခံစားရမှာပါ
နောက်တစ်ခုက ‪#‎ရှမ်းဒေါင်းလန်း‬ အဲ့ဒါကတော့လူကြိုက်အများဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ အဲ့မှာဆိုရင် ၀က်သုံးထပ်သားကို ရှမ်းမုန်ညင်း နဲ့ပေါင်းထားတာဟာဆိုရင် တကယ်ကိုဝက်သားကနူးအိပြီးစားလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေမုန်ညင်း၊ ၀က်သားကင်၊ နောက် ရှမ်းပဲပုတ်နဲ့ကြော်ထားတဲ့ ကြက်ခြောက်စပ်၊ ဆိတ်မွှသုပ်၊ မှိုကန်စွန်းအစပ်ကြော်၊ တို့ဟူးခြောက်ကြော်၊ ကြွေမုန့်ကြွပ်ကြော်၊ ငှက်ပျောဖူးသုပ်၊ နဲ့ မြင်းခွာရွက်သုပ် စုံနေအောင်စားရမှာပါ။ သူကပဲပုတ်ထောင်းလေးနဲ့ တို့စားရတာ။ ဟန်နီတော့ ရှမ်းဒေါင်းလန်းကိုအကြိုက်ဆုံးပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့မှာ အချဉ်အရသာရော၊ အစပ်နဲ့ အချိုအရသာတွေပါ စုံနေအောင်စားရလို့ပါ။
နောက်ဆုံးတစ်ခုက ‪#‎ကချင်ဒေါင်းလန်းပါ‬ အဲ့မှာအဓိကက ကြက်ကချင်ချက်ပါ။ နောက်ပြီး ကချင်ငါးအုံး၊ ဆိတ်သားထောင်း၊ ၀က်သုံးထပ်သားကင်၊ မျှစ်အစပ်ကြော်၊ ရုံးပတေသီးကြက်ဥကြော်၊ ပန်းစိမ်းကြော်၊ ဆားဘဲဥငံ၊ ဆလပ်ရွက်သုပ်၊ အာလူးမျှင်ကြော်၊ ကြာစွယ်ကြွပ်ကြော်နဲ့ တို့ဟူးခေါက်ကြော်တွေ ပါပါတယ်။ အစပ်စားတဲ့သူတွေကတော့ ကချင်ဒေါင်းလန်း ကိုကြိုက်မှာအသေအချာပါပဲ။ ဟင်းရည်ဆိုရင်လဲ ရိုးရာဟင်းရည်တွေကို ရာသီပေါ်စာတွေနဲ့အညီထဲ့ထားတာပါတဲ့။ တို့ဟူးတွေဘာတွေဆိုရင်လဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်၊ အချဉ်တွေဘာတွေကအစပေါ့နော်။ ဒေါင်းလန်း(၃)မျိုးလုံးက သူ့ရိုးရာအတိုင်း ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်။ အဲ့တော့ ဒေါင်းလန်းထမင်းစားချင်တဲ့သူတွေက ရှမ်းပြည်ဘက်ရောက်မှမဟုတ်ပဲ ရန်ကုန်မှာတင်ကိုစားလို့ရပြီနော့်…။
ဟန်နီတို့က လောဘကြီးပြီးတော့ဒေါင်းလန်းကို (၃)မျိုးလုံးမှာလိုက်တာ၊ ဘယ်လိုမှမကုန်ပါဖူး။ အိမ်ကို ပါဆယ်ပြန်ထုတ်ခဲ့ရတရ် :D အဲ့တာတောင်ပွဲသေးပဲမှာလိုက်တာပါ။ ပွဲသေးဆိုလူ(၃)ယောက်လောက်တော့ အသာလေးစားလို့ရပါတယ်၊ တစ်ပွဲကို (၂၈၀၀၀)ပါ။ ပွဲကြီးဆိုရင် အနည်းလေး လူ(၆)ယောက်လောက်စားလို့ရပြီး တစ်ပွဲကို (၄၀၀၀၀)ပါ။ မိသားစုတွေသွားစားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေစုစားရင် ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ပါတယ်။
အဲ့ဆိုင်က အမှတ်(၃)၊ ကမာရွတ်ဘူတာရုံလမ်း၊၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ် မှာရှိတာပါ။ Reserve လုပ်ချင် တဲ့သူတွေက 01 513015, 09 253114084 ကိုဆက်လို့ရပါတယ်တဲ့ရှင်…။ ကဲ! ဒေါင်းလန်းထမင်းစားချင်တဲ့သူတွေကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပြီနော့်…….။